Python2 Lesson9- Khit Minnyo
Python-for-Hackers Python2 Lesson 9
Python2 Lesson 9
by KhitMinnyo on November 04, 2017 in Python-for-Hackers
Lesson7ကြည့်ရန် link >> Click Here
Lesson 8 ကြည့်ရန် link >> Click Here
ဒီတစ်ခါလည်း ခေါင်းစဉ်မတပ်ဘဲ စ ကြည့်ရအောင်။
variable လေးတွေမှာ ကိန်းတွဲ (ကိန်းရှည်) တွေ ပါအောင် ရေးကြည့်ရင်း စ ရအောင်။
>>> numbers = [ 1221, 1331, 1441, 1551, 1661, 1771, 1991, 1991 ]
ပုံစံလေးကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဒါ ဘာနဲ့ ရေးလိုက်တယ်ဆိုတာ သိမှာပါနော် :)
အထက်ပါအတိုင်းပဲ numbers ကို variables လုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။
ကောင်းပြီ ဒီကိန်းတန်းထဲမှာ အကြီးဆုံးကိန်းကို ရှာရအောင်။ ဒီတိုင်းပဲ ကြည့်ပါ။ သိသာအောင် ရေးထားလို့ မှားစရာမရှိပါဘူး။
၁၉၉၁ ဟာ အကြီးဆုံးကိန်းဆိုတာ သိသာပါတယ်။ ဒါက ကျွန်တော်တို့က သိတာပါ။ ဒါကို ကွန်ပျူတာက သိအောင် ဘယ်လို ထုတ်ကြမလဲ။
အကြီးဆုံးဆိုတာ maximum ပဲမဟုတ်လား။ ဒါဆို maximum function နဲ့ ထုတ်ရင် ရပြီပေါ့။ Maximum Function ကို max () လို့ ရေးပါတယ်။
>>> max (numbers)
လွယ်လွယ်လေးပဲနော်ဒ အဖြေထွက်သွားပြီ။ ကိန်းတွေကို အစဉ်လိုက်မဟုတ်ဘဲ သောင်းပြောင်း ရေးထားတဲ့အခါ ဒီဖန်ရှင်လေးက အလွယ်တကူ ထုတ်ယူရှာဖွေပေးနိုင်မှာပါ။
အကြီးဆုံး ရှာတတ်ပြီဆိုတော့ အငယ်ဆုံးကိန်း minimum ကို စဉ်းစားမိလိုက်ပြီလား။ ဟုတ်ပါတယ်။ min () ဆိုတဲ့ minimum function လေးကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ စမ်းကြည့်တာပေါ့ နော :)
>>> min (numbers)
ဒါဆိုရင်တော့ ဒီအပိုင်းကို ရလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ ဆက်လိုက်ရအောင်နော်။
ဒီတစ်ခါတော့ စာလုံးတွေကို အတန်းလိုက်ရေးပြီး တစ်လုံးစီ list ပြန်ခွဲထုတ်ရအောင်။ ကဲ ဒီနာမည်လေးကပဲ စ လိုက်ရအောင်
>>> list ("khitminnyo")
['k', 'h', 'i', 't', 'm', 'i', 'n', 'n', 'y', 'o']
သူ့ဘာသာ ခွဲထုတ်ပေးသွားတယ်နော်။ ဟုတ်ရဲ့လား။
>>> list ("I love you")
['I', ' ', 'l', 'o', 'v', 'e', ' ', 'y', 'o', 'u']
ဒါဆိုရင် space ချဲထားတဲ့ စာတန်းတွေကိုပါ ဒီအတိုင်း ရှာလို့ရတယ်ဆိုတာ သိလောက်ပါပြီနော်။
ဒီတစ်ခါတော့ Append Method လို့ခေါ်တဲ့ စာသားတန်ဖိုးကို ထပ်မံ ပေါင်းထည့်တဲ့ ဖန်ရှင်လေးကို ဆွေးနွေးပေးပါ့မယ်။
ရှေ့ကို နည်းနည်း ပြန်နွှေးရအောင်ပါ။
>>>a= [ "aa" , "bb" , "cc" ]
>>>b= [ "11" , "22" , "33" ]
['aa', 'bb', 'cc', '11', '22', '33']
အထက်ပါ function လေးကို မှတ်မိကြဦးမယ်ထင်ပါတယ်။aကိုbထဲက အစုဝင်တွေ အကုန်ပေါင်းထည့်ပြီး တန်ဖိုး ပြောင်းလဲထားတဲ့ပုံစံပါ။
အဲသည် ဥပမာလေးကိုပဲ နောက်တစ်မျိုး ထပ်ကြည့်ရအောင်ပါ။
>>> a.append ("11")
['aa', 'bb', 'cc', '11']
ဒါကတော့ မူလ တည်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
append method ကို အသုံးပြုပြီး 11 ကို ထပ်ထည့်လိုက်ပါတယ်
>>>aသူ့ကို ထုတ်ကြည့်တဲ့အခါ ခုတိုင်း ထွက်လာပါတော့တယ်
နောက်ထပ် ဥပမာလေးတစ်ခု ထပ်လုပ်ကြည့်ရအောင်ဗျာ
>>> kmn = ["K","M","N"]
>>> kmn.append ("KhitMinnyo")
['K', 'M', 'N', 'KhitMinnyo']
အပေါ်မှာ ကျွန်တော် ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ Append Method ကလေးကို ပြန်ကြည့်ရင် Method ရဲ့ ဖော်မြူလာ (ရေးနည်း) လေးကို ခန့်မှန်းမိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ Method တွေကို သုံးချင်တဲ့အခါ ဒီ Method ကို ထည့်သုံးနိုင်တဲ့ Object ကို အရင်ရေးမယ် ပြီးရင် (.) ထည့်မယ်။ အစက်ကလေးပဲနော်။ ပြီးတာနဲ့ အသုံးပြုမယ့် method ကို ထည့်ရပါမယ်။ ပြီးမှ ကွင်းထဲမှာ ပြောင်းလဲ ထည့်သွင်းလိုသော အရာကို ရေးဖို့ပါ။
ဒီတစ်ခါ အသုံးပြုမှာက extended method ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ list တွေချင်း ရောနှောချင်တဲ့အခါ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဆင်တူပုံစံတွေ ထည့်မပြောတော့ဘူးနော်။
>>>a= ["1","2","3","4","5"]
>>>b= ["w","x","y","z"]
>>> a.extend (b)
['1', '2', '3', '4', '5', 'w', 'x', 'y', 'z']
lists ၂ခုကို ရောပြီး သုံးထားတာမို့လို့a+=bပုံစံနဲ့ တူတယ်လို့ ပြောလို့တော့ ရပါတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ အမှတ်စဉ် နံပါတ်ကို ပြန်ရှာပေးမယ့် Index Method ကို လေ့လာရအောင်ပါ။
ခုန နမူနာမှာပဲ ဆက်လိုက်ရအောင်။aတန်ဖိုးတွေ များသွားတဲ့ထဲက w ရဲ့ တည်နေရာ အမှတ်စဉ်နံပါတ်ကို ရှာမယ်ဆိုပါစို့။
သုညကနေ ရေတွက်ရမှာမို့လို့ w ဟာ အမှတ်စဉ် ၅ နေရာမှာ ရှိမှန်း သိပြီးသားပါ။ ဒါကိုပဲ ပြန်ရှာတဲ့ ပုံစံလေးရေးရအောင်။
တည်နေရာအမှတ်စဉ်ကို ထုတ်ပြထားပါပြီ။ မလွဲဘူးနော်။
ဒီတစ်ခါ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာလေး ဆက်ရအောင်။
Insert Method ပေါ့။ သူလည်း method ပဲမို့ method ဖော်မြူလာအတိုင်းပဲ ရေးရမှာမို့ မခက်ဘူးနော်။
ဒီအကြောင်း မပြောခင် အစားထိုး လဲလှယ်တဲ့ ဖန်ရှင်အကြောင်းကို လေ့လာခဲ့ပြီးပြီနော်။ မှတ်မိရဲ့လား။ အမှတ်စဉ်အလိုက် အစားထိုးလိုက်တာလေ။
မနေ့ကတင် day9lesson2မှာထည့်ပြောထားတာပါ။ မေ့သွားရင် ပြန်ရှာကြည့်ပါဦး။
မနေ့ကတော့ အမှတ်စဉ် တစ်ခုနေရာမှာ အစားထိုးထည့်သွင်းတာမို့ replace function ပေါ့။ ခုကတော့ အစားထိုးမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ လိုချင်တဲ့ နေရာမှာ ထပ်ထည့်မှာ။
>>> x = ["(0)Apple","(1)Orange","(2)Banana","(3)Mango","(4)Lemon","(5)Grape"]
ပထမဆုံးအနေနဲ့ x ဆိုတဲ့ variable တစ်ခုကို list လုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။
ကိန်းဂဏန်းတွေကတော့ အမှတ်စဉ် မြင်သာအောင် ပြခြင်းပါ။ အမှတ်စဉ် မှတ်ထားပေးရင် ရပါပြီဗျ။ ကိန်းတွေ မလိုပါဘူး။
ဒါကတော့ သုံးလုံးကျော်ပြီးတဲ့အခါ Melon ကို ထပ်ထည့်မယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ အစားထိုးမှာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ထပ်ထည့်မှာ။
['(0)Apple', '(1)Orange', '(2)Banana', 'Melon', '(3)Mango', '(4)Lemon', '(5)Grape']
x ကို ပြန်ဖော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ရှေ့ဆုံး ၃ခုကျော်၊ နံပါတ်စဉ် ၃ (သုညကနေ ရေတဲ့) နေရာမှာ အစားဝင်လာတာကို တွေ့ရပါမယ်။
မူလက တည်ထားခဲ့တဲ့ထဲက ကိန်းတွေဟာ အမှတ်စဉ်ကို ရှင်းရှင်းမြင်ရဖို့သာ တမင်ထည့်ထားတာနော်။ ဝင်လာတဲ့ စာနဲ့လည်း ကွဲကွဲပြားပြား မြင်ရစေချင်တာကြောင့်လည်း ပါတယ်ဗျ။
ဒီလောက်ဆိုရင် insert ကို လည်း သိလောက်ပြီ insert နဲ့ replace နဲ့ မတူတာကိုလည်း သိလောက်ပါပြီ။
Method တွေအားလုံး ရေးပုံချင်းတူတာကြောင့် ဒီတစ်ခါတော့ သိပ်ရှင်းပြစရာမလိုလောက်တော့ဘူး ထင်ပါတယ်။
ပထမအတိုင်းပဲ ပြန်ထားပြီး စမ်းကြည့်ရအောင်ပါ။
ဒုတိယကြောင်းမှာ pop method ကို နံပါတ်စဉ် ၂ မှာ အသုံးပြုလိုက်ပါတယ်။2သည် Banana ဖြစ်ကြောင်း ပြန်ဖော်ပြပေးတာပါ။
['(0)Apple', '(1)Orange', '(3)Mango', '(4)Lemon', '(5)Grape']
ပြီးတဲ့အခါ x ကို ပြန်ဖော်ကြည့်လိုက်တော့ (2)Banana ကို မတွေ့ရတော့ပါဘူး။
ဒါက pop method ရဲ့ သဘာဝပါ။ နားလည်ပြီထင်တယ်နော်။
သူ့ကို ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ သုံးမလဲ?
ထုတ်ယူလိုက်ပြီးတာနဲ့ မရှိတော့ဘဲ ကျန်တာတွေသာ ဖော်ပြမယ့်နေရာမျိုးမှာ သုံးတယ်ပေါ့။
အထက်ပါ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပြန်စုကြည့်ရအောင်။
သူလည်းဖယ်ထုတ်တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အမှတ်စဉ်နဲ့ မဟုတ်ဘဲ တိုက်ရိုက် ဖယ်ထုတ်တာပါ။ နမူနာ လုပ်ကြည့်ရအောင်။
>>> x = ["Apple","Orange","Banana","Mango","Lemon","Grape"]
>>> x . remove ("Mango")
['Apple', 'Orange', 'Banana', 'Lemon', 'Grape']
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ pop နဲ့ Remove မတူတာလည်း သိလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။
ခုတော့ Reverse Method ကလေးကို ဆွေးနွေးသွားပါ့မယ်။ Reverse ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ ရှေ့နောက်ကို ပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
>>> x . reverse ()
['Grape', 'Lemon', 'Mango', 'Banana', 'Orange', 'Apple']
x . reverse () မှာ ကွင်းထဲ ထည့်စရာမလိုပါဘူး။ နောက်ကနေ ပြန်စီမှာမို့ ပါ။
Sort ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ စီတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သူက ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်ပဲ စီစဉ်သွားပါတယ်။ အောက်ပါ ဥပမာလေးတွေကို ကြည့်ရအောင်။
>>> x = [ 1, 5, 12, 4, 50, 33, 21, 19, 100, 99, 88]
[1, 4, 5, 12, 19, 21, 33, 50, 88, 99, 100]
သောင်းပြောင်းဖြစ်နေတဲ့ ကိန်းတွေကို စီပေးလိုက်ပြီနော်။
>>> y = ["zoo","house","apple","ball","cat","dog"]
['apple', 'ball', 'cat', 'dog', 'house', 'zoo']
ဘယ်လို စီလိုက်တာ သင်မြင်ပါသလဲ။
ခုလောက်ဆို sort method ကို ကောင်းကောင်းသိပြီိလို့ ယူဆလိုက်ပါပြီ။
ဒီတစ်ခါတော့ idle ကို အသုံးပြုသွားမယ်လို့ စီစဉ်လိုက်တဲ့အတွက် idle နဲ့ သင်ခန်းစာ ပြောင်းရေးလိုက်တာမို့ အချိန်နောက်ကျသွားပါတယ်။
ရေးတဲ့အပိုင်းရော RUN တဲ့အပိုင်းကိုပါ တစ်ပြိုင်နက်တည်း လုပ်ဆောင်နိုင်တာမို့ idle က ပိုပြီး မြန်ဆန်ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ရှေ့ပိုင်းတွေမှာက python နဲ့ ipython တို့ကိုသာ အသုံးပြုခဲ့တာက manual သိအောင်ရယ် Terminal ကနေ python ......py နဲ့ RUN တတ်အောင်ရယ် ဖြစ်ပါတယ်။
ခုလောက်ဆို manual run တာကိုလည်း သိပြီးဖြစ်လို့ ထူးထွေ ပြောမနေလိုတော့ပါ။ စ လိုက်ရအောင်ဗျာ။
သင်ခန်းစာ မစတင်မီ ဒီနေ့ idle ကို အသုံးပြုမှာဖြစ်လို့ idle ကို ဖွင့်ထားဖို့ရယ် file >> New ခေါ်ထားဖို့ရယ် လိုအပ်ပါတယ်။
file name ကို Day 11 ရဲ့ အတိုကောက် အဖြစ် d11 လို့ ပေးလိုက်ပါ။ idle ကနေ save တာမို့ .py ထည့်စရာမလိုပါ။
while price != "kmn":
print """ The following things are what can do with this program
1 - Show Pricelist
2 - Add Price
3 - Delete Price
4 - SortPricelist """
choice = raw_input(" Choice : ")
အထက်ပါကုဒါလိုင်းလေးတွေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ သတ်မှတ်ပုံစံလေးကို ပြန်လေ့လာပါ။
ရှင်းပြဖို့ လိုတာတွေ ပြောပါမယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ pricelist ကို ဘာမျှ မဖြည့်ဘဲ ထားလိုက်ပါတယ်။ ဒုတိယအနေနဲ့လည်း price ကို ဘာဆိုဘာမှ ဖြည့်မထားပါဘူး။ တတိယအနေနဲ့တော့ while loop ကလေးနဲ့ ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
while loop အောက်မှာရှိတဲ့ ပရင့်မှာတော့ Triple code ခေါ် သုံးထပ်စည်းနဲ့ ရေးထားတာကို တွေ့ရပါမယ်။ ပုံမှန် print လို "......." နဲ့ ရေးရင် ခုလို မပေါ်ပါဘူး။ choice ကို while loop နဲ့ တွဲမှာမို့ while loop အောက်မှာ ရေးရပါမယ်။ အပေါ်ကပရိုဂရမ်ကို ပြန်ကြည့်ရင် အတော်တော့ ရုပ်ပေါက်နေပါပြီ။ ဘာရုပ်လဲတော့ မသိဘူးနော်။ ကဲ ရှင်းပြစရာလေးတွေ ရှင်းပြပါမယ်။
ကျွန်တော်တို့ ခုရေးထားတဲ့ ပရိုဂရမ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာကြည့်ရအောင်။ ခုပုံစံကလေးကို ကြည့်ရင် ကျွန်တော်ရေးထားတာက
4 - SortPricelist
ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ exit လုပ်ချင်ရင်0ကို နှိပ်၊ Pricelist တွေ ထုတ်ပြချင်ရင် 1 ကိုနှိပ်၊ Price တွေ ထပ်ထည့်ချင်ရင်2ကိုနှိပ်၊ Price တွေ ဖျက်ချင်ရင်3ကိုနှိပ်၊ price list ကို စီချင်ရင်4ကိုနှိပ် လို့ ရေးထားတာပါ။
ရေးသာ ရေးထားတာ တစ်ကယ်တမ်း အလုပ်မလုပ်သေးပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အလုပ် လုပ်စေမယ့် ကုဒ်မှ မပါသေးတာ။
print "\_n Good Bye! "
အထက်ပါ ကုဒ်လိုင်းလေးကို choice မှာမို့ ခုနလိုင်းအောက်မှာပဲ ဆက်ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆို0ကို ရွေးချယ်လိုက်ရင် exit လုပ်မှာမို့ exit မထွက်ခင် Good Bye ဆိုတာလေးကို ထုတ်ပြလိုက်တာပါ။
print "\_n The following is list of the program "
for item in pricelist:
သက်ဆိုင်ရာ လိုင်းအောက်တွေမှာပဲ ရေးမှ အဆင်ပြေပါမယ်နော်။
add = int(raw_input("Add Any Price : "))
ဒါက အမှတ်စဉ် ၂ အတွက် ကုဒ်ပေါ့။ သင်ပြီးသားတွေချည်းပဲမှို့ ရှင်းပြမနေတော့ဘူးနော်။
delete = int(raw_input("Please type number you want to delete : "))
if delete in pricelist:
print delete, "is not in our pricelist, now."
ဒါက အမှတ်စဉ် သုံးအတွက်ပါ။
ဒါဆိုရင် နံပါတ်0-4ထိ အားလုံးအတွက် စီစဉ်ပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပေါ့ အသုံးပြုသူက0-4အတွင်း မဟုတ်ဘဲ အခြားကိန်းတွေ မှားရိုက်မိရင်ကော။ ပရိုဂရမ် စီစဉ်တဲ့အခါ ဘက်ပေါင်းစုံလည်း စဉ်းစားဖို့ လိုအပ်ပါသေးတယ်။
print "\_n Your choice ", choice , " is Invalid number."
အထက်ပါ တစ်လိုင်း ထပ်ထည့်လိုက်ရင် ခုန အခက်အခဲ ပြေလည်ပြီပေါ့။ ကဲ အချိန်ရှိတုန်းလေး ထပ်ဆက်ရအောင်ခင်ဗျ။
Program တစ်ဖိုင်လုံးကို အောက်မှာ ပြန်ပြပေးမယ်နော်။
ရေးထားတဲ့ စာလေးက နည်းနည်း လေးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အစွမ်းကို စမ်းကြည့်လိုက်ရအောင်။
RUN လိုက်လို့ ထွက်လာတဲ့အထဲက နံပါတ် ၂ ကိုနှိပ်ပါ။ Add Price ပေါ့။ ခုမှ စမှာဆိုတော့ ဘာမှ မရှိသေးတဲ့အတွက် ဖြည့်ရတာပါ။
ကဲ 100 လို့ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် နံပါတ် ၂ ကိုရွေး။ 200 ထပ်ထည့်။ နံပါတ် ၂ ထပ်ရွေး။ 300 ထည့်။ နံပါတ် ၂ ထပ်ရွေး။ 400 ထည့်။
ပြီးရင် ဒေတာတွေ မှတ်ထားတာ အဆင်ပြေ မပြေ နံပါတ် ၁ ကို နှိပ်ပြီး ပြန်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
The following is list of the program
The following things are what can do with this program
ပြန်စစ်ကြည့်ရင် အထက်ပါပုံစံအတိုင်း မြင်ရပါမယ်။ ဒါ ကျွန်တော်တို့ ဖြည့်သွင်းထားတဲ့ ဒေတာတွေ အောင်မြင်ပြီပေါ့။
Please type number you want to delete : 300
ခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ အမှတ် ၃ ကို ရွေးပြီး ၃၀၀ ကို နမူနာအနေနဲ့ ဖျက်ကြည့်လိုက်တာပါ။
ကဲ ဟုတ်မဟုတ် ၁ ကိုရွေးပြီး ပြန်ဖော်ကြည့်ရအောင်။
ပြန်စစ်ကြည့်ရင် ခုန ဖျက်လိုက်တဲ့ ၃၀၀ ပါမလာတော့တာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ နောက်ဆုံး command ကို စမ်းကြည့်ရအောင်ပါ။
Choice : 4
အထက်ပါအတိုင်းပဲ နံပါတ် ၄ command ကို အသုံးပြုပြီး ကိန်းတွေကို ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် ပြန်စီလိုက်ပါတယ်။
နံပါတ်စဉ် ၁ ကို ရွေးပြီး ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အထက်ပါအတိုင်းပဲ ကိန်းတွေ ပြန်စီထားတာကို မြင်ရပါမယ်။ ဒီသင်ခန်းစာလေးကို ပိုင်နိုင်အောင် လေ့လာထားကြပါခင်ဗျာ
အခက်အခဲတွေ ရှိရင်လည်း comment မှာမေးနိုင်ပါတယ်။
အားလုံး အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ
ဒီ Website ကလေးမှာ တင်ထားတဲ့ အကြောင်းအရာအတွေကို ကဏ္ဍအလိုက် ရွေးချယ် ကြည့်လိုပါက
ဒီစာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပြီးလည်း ရွေးချယ်ကြည့်နိုင်သလို Menu Box ကနေလည်း ရွေးချယ်ကြည့်နိုင်ပါကြောင်း ခင်ဗျာ
By KhitMinnyo on November 04, 2017